Nhau - Maitiro Ekugadzirisa - Kugaya Kugadzira
Maitiro Ekugadzirisa - Kugaya Kugadzira
CNC lathes inogona kushandiswa kugadzirisa yakaoma rotary maumbirwo emuviri. Kugaya ndeyekugadzirisa iyo isina chinhu, iine-kumhanya kutenderera kweyekucheka mucheka mune isina chinhu banga, cheka chimiro uye hunhu hwekudikanwa. Kwakajairika azvikuya inowanzo shandiswa kushandiswa nyore maumbirwo / maficha akadai contours uye grooves. CNC hwokugaya hwakabvira muchina inogona kushandiswa muitiro kunzwisisa zvitarisiko uye zvinhu. Kugaya uye kunofinha machining centre kunogona kuve matatu kana akawanda-axis azvikuya uye anofinha kugadzira, anoshandiswa kugadzira, chakuvhuvhu, yechigarire, yechigarire, yakatetepa-madziro akaomarara pamusoro, ekugadzira epurasitiki, chipande uye zvichingodaro. Mukusarudzwa kweCCC yekugaya yekugadzirisa zvemukati, inofanirwa kupa yakazara kutamba kune zvakanakira uye yakakosha basa reCCC yekugaya muchina.
Iyo yakajairika inotonhora nzira yekushanda yesimbi, inosiyana nekushandura iyo mukugaya chishandiso chinotenderera nekumhanyisa kumhanyisa chinotungamirwa neshinda apo workpiece iri kugadzirwa inoramba yakamira.
Musiyano uripo pakati pekutendeuka nekugaya:
Turning inoshandiswa kugadzira michina zvikamu, zvikamu kuburikidza neatatu-kubata chuck kiramba pane muchina chishandiso chokurukisa, uye kumhanya-kumhanya kutenderera, uye wozoshandisa chishandiso zvinoenderana nebhazi rebhaji reiyo rotary muviri banga, cheka chigadzirwa chigadzirwa. Iyo lathe zvakare inogona kuitisa iko kugadzirwa kwemukati gomba, tambo, inoruma maruva, nezvimwewo, iwo ekupedzisira maviri akaderera-kumhanyisa kugadzira.
Iyo Kugadzira Tekinoroji
(2) Iyo nzvimbo curve kana pamusoro payo iyo yemasvomhu modhi yakapihwa.
(3) Kunyangwe chimiro chiri nyore, kune hukuru hwakawanda uye zvikamu zvakaoma kuti zvionekwe.
(4) zvakaoma kucherechedza, kudzora uye kuona iyo yemukati mhango uye mukati mebhokisi muviri kana uchigadziriswa neyakajairwa mashini maturu.
(5) maburi kana ndege dzine zvidimbu zvakaomarara zvinodiwa.
(6) Chinhu chakareruka kana chimiro chinogona kugadziriswa mune imwechete yekuchinjisa maitiro.
(7) Iko kushandiswa kweCCC yekugaya inogona kuvandudza zvinobudirira kugadzirwa, kudzikisira kushanda kwesimba kwehuwandu hwekugadzirisa zvemukati.
Inokodzera CNC yekugaya main processing zvinhu zvine zvinotevera zvikamu: ndege contour zvikamu, zvinowirirana Angle zvikamu, nzvimbo yepamusoro contour zvikamu, maburi uye tambo.
Post nguva: Aug-14-2021